Ikhaya Elimangalisayo EmaPontini ane-WiFi namakamelo okulala ama-2 - I-Airbnb
Ikhaya Elimangalisayo EmaPontini ane-WiFi namakamelo okulala ama-2
U-Novasol unokuphawula okungu-418 kwezinye izindawo.
Leli fulethi elikhangayo eliyi-duplex, elinwebeka ngaphezulu kwezitezi ezimbili eziphezulu endaweni yokugaya yangaphambili e-Cavigny, lihlanganisa ukunethezeka kwesimanje nezingodo namatshe. Jabulela ukubukwa okuhle kwezindawo zasemaphandleni ezizungezile ezinezinkomo namahhashi, kanye nomsele ongajika amasondo omshini wokugaya ngisho nanamuhla. Edolobheni lase-Avranches eliqhele ngamakhilomitha amathathu, ungabuka iMont Saint-Michel kanye netheku layo usuka endaweni eyingqayizivele engadini yezitshalo.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 5 m / ukuyothenga 3 km / Amanye amanzi noma indawo yokubhukuda (ichibi lomphakathi elingaphakathi) 3 km / indawo yokudlela 3 km / idolobha eliseduze(Avranches) 3 km / amanzi(Ulwandle/sandy beach) 20 km
Hlola ezinye izinketho ezise- Ponts namaphethelo